Ilkay Gundogan oo xaqiijiyey lambarka uu u xiran doono kooxdiisa Manchester City – Gool FM
Ilkay Gundogan oo xaqiijiyey lambarka uu u xiran doono kooxdiisa Manchester City
(Manchester) 05 Luuliyo 2016 – Laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa shaaca qaaday in gacanta loo geliyey lambar horudhac ah oo uu u xiran doonto Man City, tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay Borussia Dortmund.
Ilkay Gundogan ayaa u xiran doona kooxda Manchester City lambarka 16-aad (No16), waxaana xiddiga xulka qaranka Jarmalku uu xaqiijiyey in gacanta loo galiyey lambarkii hore ee uu kooxda Man City u xiran jiray Sergio Aguero.
Lambarkan ayaa is bedeli kara haddii Samir Nasri uu kooxda isaga tago oo uu banneeyo lambarka 8-aad (No8), kaasoo uu Gundogan u xiran jiray kooxdiisii hore ee Borussia Dortmund.
25-sano jirkaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Waqti xaadirkaan, waxaan haystaa lambar 16, waxayna u muuqataa inay sii ahaan doonto No16.”
Neymar: “Dambiile maahi wax qalad ahna ma samayn”